Burma Partnership » Resources for call for action on Sunday3May World Press Freedom Day – #FreeUnity5
Resources for call for action on Sunday3May World Press Freedom Day – #FreeUnity5
By Amnesty International • May 1, 2015
PLEASE DO NOT SHARE TILL SUNDAY3MAY
Graphic of the Unity Five in .jpg which can be posted on the Ministry of Information’s Facebook page.
Right click the image and choose “save image as”
Twitter and Facebook messages to post on the Ministry of Information’s Facebook page:
Journalism is NOTacrime. #FreeUnity5! http://bit.ly/1DMoL4b [graphic attached] #PressFreedomDay
#Myanmar:5journalists in prison for reporting but journalism NOTacrime: #FreeUnity5 http://bit.ly/1DMoL4b #PressFreedomDay
#FreeUnity5: journalists in #Myanmar are not criminals: http://bit.ly/1DMoL4b #PressFreedomDay
Facebook posts for your own wall to gather support for the action:
In Myanmar,5media workers are serving7years in jail for publishing an article the government didn’t like. Journalism is notacrime: comment on the Minister of Information’s Facebook account https://www.facebook.com/ye.htut.988?fref=ts and demand #FreeUnity5.
Journalism is NOTacrime. Demand the release of5media workers imprisoned in Myanmar for doing their job. Leaveacomment on Myanmar’s Information Minister’s page https://www.facebook.com/ye.htut.988?fref=ts. #FreeUnity5!
Five media workers in Myanmar are serving7years in jail for doing their job. On World Press Freedom Day help flood the Minister of Information’s Facebook page https://www.facebook.com/ye.htut.988?fref=ts : leaveacomment demanding their release. #FreeUnity5.
မြန်မာ ဖေ့စ်ဘွတ်လူမှုကွန်ရက် လှုပ်ရှားမှု – မေလ ၃ ရက်နေ့
ဖေ့စ်ဘွတ် (ဖေ့စ်ဘွတ် ဓါတ်ပုံအောက်တွင် ထည့်ရန်စာသား)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီဒီယာလုပ်သား (၅) ဦးသည် အစိုးရမနှစ်သက်သော ဆောင်းပါးအား ထုတ်ဝေမှုပြုသည့်အတွက် (၇) နှစ် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံနေရသည်။ သတင်းထောက်ပညာရပ်သည် ပြစ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဖေ့စ်ဘွတ် အကောင့် https://www.facebook.com/ye.htut.988?fref=ts ပေါ်တွင် မှတ်ချက်ရေးပြီး Unity မှ (၅) ဦးအား လွတ်မြောက်ရန် တောင်းဆိုပါ။ Unity မှ (၅) ဦးအား လွှတ်ပေးပါ။ #FreeUnity5
သတင်းထောက်ပညာရပ်သည် ပြစ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ မိမိအလုပ် မိမိလုပ်ရုံဖြင့် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချ ခံနေရသည့် မီဒီယာလုပ်သား (၅) ဦး၏ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/ye.htut.988?fref=ts ပေါ်တွင် မှတ်ချက်ရေးပါ။ #FreeUnity5
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီဒီယာလုပ်သား (၅) ဦးသည် မိမိအလုပ်မိမိလုပ်ရုံဖြင့် (၇) နှစ် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံ နေရသည်။ ကမ္ဘာ့ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/ye.htut.988?fref=ts ပေါ်၌ – ၎င်းတို့၏ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုပေးခြင်းဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါ။ Unity မှ (၅) ဦးအား လွှတ်ပေးပါ။ #FreeUnity5
သတင်းထောက်ပညာရပ်သည် ပြစ်မှုတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ Unity မှ (၅) ဦးအား လွှတ်ပေးပါ။ #FreeUnity5 ။ [ဘလော့ဂ်သို့ လင့်ခ်] [ဂရက်ဖစ်ပုံ ပူးတွဲ] ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ #PressFreedomDay
#မြန်မာ – သတင်းထောက် (၅) ဦးသည် သတင်းအစီရင်ခံခြင်းကြောင့် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံနေရသည်။ သို့သော်သတင်းထောက် ပညာရပ်သည် ပြစ်မှုတစ်ခု မဟုတ်ပေ – Unity မှ (၅) ဦးအား လွှတ်ပေးပါ။ #FreeUnity5 [ဘလော့ဂ်သို့ လင့်ခ်] ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ #PressFreedomDay
Unity မှ (၅) ဦးအား လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါ #FreeUnity5 မြန်မာနိုင်ငံရှိ သတင်းထောက်များသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ မဟုတ်ပေ – [ဘလော့ဂ်သို့ လင့်ခ်] ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ #PressFreedomDay
လူ (၅) ဦးပုံပါဝင်သော Unity Five ဂရက်ဖစ်ပုံ။
စာသား – သတင်းထောက်ပညာရပ်သည် ပြစ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပေ။ Unity မှ (၅) ဦးအား လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါ #FreeUnity5
Unity ဂျာနယ်၏ CEO ဖြစ်သူ ဦးတင့်ဆန်း၏ ဂရက်ဖစ်ပုံအား ၎င်း၏ ကိုးကားစကားဖြင့်။
စာသား – “ကျွန်ုပ် လိုချင်သည်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်သည်။” Unity မှ (၅) ဦးအား လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါ #FreeUnity5